tips(tips) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । धेरै मानिसको एउटा गुनासो हुन्छ–‘म पर्याप्त पैसा कमाउँछु तर बचत गर्नै सक्दिनँ।’ हो, प्रायः जागिरे मानिसको यस्तै गुनासो हुने गरेका छन्। आफूले परिश्रम गरी कमाएको पैसा बचाउन कसलाई चाह हुँदैन र ? तर यसका लागि ठूलै मेहनत, आर्थिक अनुशासन र दृढ प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्दछ। जीवनमा अन्य आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्नुपर्ने...
तुरुन्त छाड्नुस् पैसासँग जोडिएका यी खराब बानी, नत्र बढ्नसक्छ ऋणको बोझ
काठमाण्डौ । आफूसँग टन्न पैसा, एउटा घर र अनि गाडी होस् भन्ने सबै चाहन्छन्। तर, आममानिसका लागि यी चाहना पूरा गर्न कडा मेहनत र राम्रो वित्तीय योजना आवश्यक हुन्छ। यसका साथै पैसासँग जोडिएका खराब बानी पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ। हामी थाहा हुँदैन कि पैसासँग जोडिउका खराब बानीले हामीलाई धन आर्जन गर्न रोकिरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामी पैसासँग...
काठमाण्डौ । सूचना प्रविधिको वर्तमानको युगमा तपाइँ हामी सबैले आफ्नो अत्यावश्यक डकुमेन्टहरुको सफ्ट कपी बनाएर गुगल ड्राइभमा स्टोर गर्ने गछौँ । किनकि यो क्लाउड सेवा एकदमै सुरक्षित हुने गर्दछ । यसमा फाइल लिक हुने सम्भावना पनि एकदमै कम हुने गर्दछ । तर फाइल स्टोर गर्दा कयौँपटक हतारमा हामी गलत बटन थिच्न पुग्छौँ । जसका कारण फाइल डिलिट हुन पुग्छ ।...
काठमाण्डौ । यो साता सेयर बजारमा केही उतारचढाव देखियो। समग्रमा यो साता बजार २३.६५ अंकले उकालो लाग्यो भने ८१ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘जोखिमयुक्त’ भन्दै ५१ वटा सूचीकृत कम्पनीहरुको नामावाली सार्वजनिक गरेपछि यसले पनि बजार निकै ततायो। बोर्डको यो कदमका विषयमा सामाजिक सञ्जालहरुमा निकै बहस नै चल्यो र अझै...
अवकाशपछि प्राप्त रकम सेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाण्डौ । जागिरबाट अवकाशपछि तपाइँसँग निश्चित रकम हुन्छ। त्यही रकमले तपाइँले आफ्नो बाँकी जीवनको गुजारा चलाउनुपर्ने हुन्छ। विशेषज्ञहरु यदि अवकाशपछि तपाइँ आफूसँग भएको निश्चित पुँजीबाट राम्रो प्रतिफल (रिटर्न) चाहनुहुन्छ भने सेयरमा लगानी गर्न सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। तर धेरैजसो मानिस अवकाशपछि प्राप्त रकम सेयरमा लगानी गर्न...
यस्ता छन् बेजोसलाई उछिनेर विश्वकै धनी बन्न सफल व्यक्तिका छ वटा रहस्यहरू
जस्टिन रोल्याट -बीबीसी न्यूज अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसलाई उछिन्दै इलोन मस्क विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। टेस्ला र स्पेसएक्सका उद्यमी मस्कको कुल सम्पत्ति १८५ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ। विद्युतीय कार कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएपछि उनको सम्पत्ति बढेको हो। उनको सफलताको रहस्य के हो? केही वर्षअघि मैले यसै विषयमा कुराकानी...
सेयरमा लगानी गर्नुअघि के–के कुरा हेर्ने ? कसरी गर्ने कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण ?
-उज्वल घिमिरे लामो समयका लागि सेयर किन्न मन भए फन्डामेन्टल एनलाइसिस(आधारभूत विश्लेषण) गरिन्छ । छोटो समयका लागि किन्ने लगानीकर्ता वा ट्रेडरहरुले पनि प्रयोग नगर्ने त हैन तर उहाँहरुले प्राविधिक विश्लेषण बढी रुचाउनुहुन्छ। सेयरको आधारभूत विश्लेषणका अनेक तरिका छन् । सबै सिक्न त आजीवन लाग्छ। तर यहाँ चाहिँ म उपकरणहरुका एउटा संयोजनबारे र...
कसरी चिन्ने अस्थिर बजार ? यसबाट हुने जोखिम कसरी कम गर्ने ?
काठमाण्डौ । सेयर बजारको अस्थिरताबाट हरेक लगानीकर्ता डराउँछन् । सेयर बजार यस्तो ठाउँ हो, जहाँ आउने प्रत्येक घण्टामा हाम्रो लगानीले लाभ दिन्छ वा घाटा भन्ने थाहा हुँदैन । तर, यस्ता अनिश्चितता र उतारचढावका अनेकन कारणहरु हुन्छन्, यी कारणलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । यस्ता कारणहरुको सटीक ढंगले अनुमान लगाउन समेत सकिन्न । यदि तपाई बजारमा आउने...
नयाँ लगानीकर्ताले सेयरबजार प्रवेश गर्नुअघि बुझ्नैपर्ने कुरा र जोखिम न्यूनिकरणका उपाय
-निर्मल पौडेल १.कुनै पनि कम्पनी खोल्नका लागि ठूलो परिणाममा पूँजी आवश्यक पर्ने हुँदा जनताबाट स्वेच्छा अलि अलि गरेर ठूलो रकम उठाइन्छ। यसरी कम्पनीले आवश्यकता अनुरूपको परिणाममा पुँजी संकलन गर्छ र नाफा गरेको खण्डमा राम्रो प्रतिफल तथा लाभांश दिने (तर ब्याज नदिने) शर्तमा उठाउने रकमलाई नै आइपीओ भनिन्छ र यसरी पैसा तिर्ने जनता त्यस कम्पनीको...
नोबेल विजेताबाट सिक्नुुस् करोडपति बन्ने ४ मन्त्र, जसले अपनायो ऊ बन्यो धनाढ्य
काठमाण्डौ । करोडपति बन्ने सपना सबैलाई हुुन्छ। तर करोडपति बन्नका लागि केही नियम कडाइका साथ पालन पनि गर्नुुपर्छ। अर्थशास्त्रमा नोबेल पुुरस्कार बिजेताका अनुुसार धनी बन्न सबैभन्दा पहिले सिढी बचत हुुन्छ। धनी बन्न सही दिशामा कदम बनाउन आवश्यक पर्छ। सही समयमा यस्तो कदम उठाउन आवश्यक छ, धेरै बचत र सम्पत्ति बनाउने आपसमा सीधा सम्बन्ध छ। धनी...